eNasha.com - सङ्गीत उद्योगको रुन्चे कुरा
सङ्गीत उद्योगको रुन्चे कुरा
केही समययता नेपाली म्युजिक भिडियोहरु वेबसाइटमा राख्नु फेशन बनिसकेको छ । हरेक नयाँ गायकगायिकाहरु आफ्नो परिचय बनाउन म्युजिक भिडियो बनाउन जति लालायित हुन्छन्, तिनलाई वेबसाइटमा राख्न उत्तिकै चाख दिन्छन् । म्युजिक भिडियो 'डाउनलोड'को लोभ देखाएर वेबसाइटहरु पनि राम्रैसँग फले, फूले । तर पछिल्लो समय गायकगायिकाहरुको अनुरोध सुन्न थालिएको छ- "वेबसाइटमा भिडियोलाई डाउनलोड गर्न नमिल्ने गरी राख्न मिल्दैन !"
नेपालजस्तो देश, जहाँ इन्टरनेट कनेक्शन भाग्यका भरमा हुन्छ, कनेक्शन भइहाल्यो भने यति ढिलो पृष्ठ खुल्छ कि एक न्रि्रा भ्याइहालिएला कि भन्ने भान हुन्छ । यस्तो अवस्थामा गायकगायिकाहरु भन्न थालेका छन्- "वेबसाइटमा भिडियोलाई डाउनलोड गर्न नमिल्ने गरी राख्न मिल्दैन -" किन यसो भनिरहेका छन्, सङ्गीतकर्मी र सङ्गीत उद्योग - उद्योगीहरु भन्छन्- "इन्टरनेटबाट डाउनलोड गरेर पाइरेसीलाई बढावा मिलिरहेको छ ।"
कस्तो हास्यास्पद तर्क ! इन्टरनेटमा भएको 'लो रिजोलुसन' (ज्यादै स्तरहीन दृश्य) को भिडियोका कारण पाइरेसीलाई बढावा मिलिरहेको छ रे !
मूलतः यो तर्क चाहिँ सङ्गीत उद्योगको सबैभन्दा रुञ्चे तर्क हो, इन्टरनेटबाट डाउनलोड हुनु- पाइरेसीलाई बढाउनु हो । खासमा त कुरा के हो भने युट्युब, माइस्पेस, मेटाक्याफेजस्ता भिडियो स्टि्रमिङ वेबसाइटको देखासिकी मात्र हो सङ्गीतकर्मीहरुको यो भनाइ । नेपालजस्तो देशमा भिडियो स्टि्रमिङ गर्नु महङ्गो मात्र होइन कि भिडियो हेर्नु झ्याउलाग्दो काम हो । पाँच मिनेटको भिडियोलाई दश मिनेटभन्दा बढी समय लगाएर हेर्नु राम्रो कि केही थोरै मिनेटमै डाउनलोड गरेर इन्टरनेट नभएको बेलामा पनि आनन्दपूर्वक हेर्नु राम्रो ! यो एउटा दर्शकलाई दिनुपर्ने सुविधाको कुरा हो ।
केही वर्षघिसम्म इन्टरनेटमा गीत, भिडियो डाउनलोड गर्न दिनुलाई सङ्गीत कम्पनी र गायकगायिकाहरुका लागि गर्वको कुरा थियो । तर पछिल्ला समयमा यस्ता कुरा उठ्नुलाई कम्पनीहरुको पातलिँदै गएको हालतलाई इङ्गित गरिरहेको छ । केही समयअघि म्युजिक कम्पनी र एफएम रेडियोबीच मनमुटाव बढेको थियो । म्युजिक कम्पनीहरुको माग थियो, प्रति गीत हामीले रोयल्टी पाउनु पर्छ । यति रेडियोहरुको दाबी थियो, उनीहरुको माग नाजायज छ । रोयल्टी हामीबाट होइन, श्रोताबाट लिनुपर्छ । रेडियो त प्रचारको माध्यम मात्र हुन् । आखिरमा म्युजिक कम्पनीले यो तर्कमा हार खानु पर्‍यो ।
रेडियो, टेलिभिजन र इन्टरनेटमा गीत राखेबापत् आफ्नो भाग खोज्नु उनीहरुको पक्षमा ठीकै होला तर एउटा कुरा के सत्य हो भने म्युजिक कम्पनीले अब घरेलु बजारमा मात्र आफूलाई सीमित राख्नु तिनका लागि हानिकारक बन्न पुगेको छ । सीमित आयश्रोत, अस्थिर राजनीति र दैनिकजसो हुने बन्द र हड्तालले नेपाली म्युजिक कम्पनीको ढाड सेकिएको छ । यस्तो अवस्थामा तिनले नेपालको आन्तरिक बजारमा मात्र सीमित हुने रहर गरेर हुँदैन । तिनले अब विदेशी बजार खोज्नुपर्ने भएको छ । तर यसका लागि तिनमा इच्छाशक्ति निकै कमजोर छ ।
विदेशी बजार भन्ने बित्तिकै म्युजिक कम्पनीहरु खैरे र अंग्रेज सम्झन्छन् । तर खाडी मुलुकहरु, मलेसिया, सिंगापुर र भारतमै पनि आफ्ना सामग्रीहरुको राम्रोसँग पहुँच दिन सकिरहेका छैनन्, म्युजिक कम्पनीहरुले । यस्तो अवस्थामा नेपाली गीतसङ्गीत प्रेमीहरुको भरपर्दो सूचना र मनोरञ्जन लिने ठाउँ इन्टरनेट नै बन्न पुगेको छ । इन्टरनेटमा राखिएको स्तरहीन अडियो/भिडियोले आफ्नो सांगीतिक तिर्खा नमेटिइरहेको उनीहरुले नेपालबाट आफन्तलाई एल्बम लिइदिन बारम्बार गरेको अनुरोधबाट थाहा हुन्छ ।
त्यसैले म्युजिक कम्पनीहरुले भिडियो प्रदर्शन र अडियो डाउनलोडमा अंकुश लगाउने भन्दा पनि देशबाहिरको खुला बजारमा आफ्नो पकड विस्तारै फैलाउँदै लैजान आवश्यक छ । त्यसका लागि शुरुवाती दिनहरुमा लाग्ने खर्च र त्यसको न्यून 'रिर्टन'ले नै बढीभन्दा बढी कम्पनी तर्सिएको देखिन्छ । तर, लगानी नगरी कमाई हुँदैन भन्ने कुरा तिनले बुझ्न आवश्यक छ । र, तिनले बुझ्न जरुरी छ, इन्टरनेट आफ्ना सामग्री प्रचार गर्ने सबैभन्दा उत्तम उपाय हो । योभन्दा अर्को उत्तम उपाय अर्को केही छैन ।